NDIR Gas Sensor Factory, Suppliers - China NDIR Ndị Na-emepụta Gas Gas
Carbon dioxide CO2 NDIR Gas Detector Dual Channel Nyochaa Ogo ikuku-SDG11DF42
Ezinụlọ SDG11DF42 nke ihe mmetụta sensọ thermopile maka NDIR (Infrared gas detection) bụ ihe ntanetị ọkụ thermopile nwere ọnụọgụ mgbaàmà mmepụta nke dabara na ikike infrared (IR) merenụ. Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas. Akwụkwọ ntụnye na-akwụ ụgwọ maka ọnọdụ niile metụtara.
SDG11DF42 nke nwere ụdị CMOS dakọtara nke ọhụrụ na-egosi ezigbo uche, obere ọnụọgụ ọkụ nke uche yana nrụpụta dị elu na ntụkwasị obi. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Ezinụlọ SDG11DF42G1 nke ihe mmetụta sensọ thermopile maka NDIR (Infrared gas detection) bụ ihe ntanetị ọkụ thermopile nwere ọwa nwere akara ngosi mgbapụta ọfụma dabara na ikike infrared (IR) merenụ. Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas. Akwụkwọ ntụnye na-akwụ ụgwọ maka ọnọdụ niile metụtara.
SDG11DF42G1 nwere ụdị ihe ọhụrụ CMOS dakọtara nke ọma na-egosipụta ezigbo uche, obere ọnụọgụ ọkụ nke uche yana nnukwu nrụpụta na ntụkwasị obi. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 uru maka obere voltaji na-eweta nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Ezinụlọ SSG11DF42 nke ihe mmetụta sensọ thermopile maka NDIR (Infrared gas nchọpụta) bụ otu ọwa thermopile sensor nwere ikikere mgbapụta mmepụta nke dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas. SSG11DF42 nke nwere ụdị CMOS ọhụrụ nwere ike ịnweta ihu igwe nwere ezigbo uche, obere ọnụọgụ ọkụ nke uche yana nrụpụta na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
NDIR Gas Sensọ Single Channel ASIC AFE Integrated Carbon Dioxide CO2 Gas Detector-SSG11DF42G1
Ezinụlọ SSG11DF42G1 nke ihe mmetụta sensọ thermopile maka NDIR (Infrared gas detection) bụ otu ọwa thermopile nwere ọwa nwere akara ngosi mgbapụta ọfụma dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas.
Sensọ Methane Metal (CH4) Dual Channel NDual Ọkụ Combustible Gas-SDG11DF33
Ezinụlọ SDG11DF33 nke ihe mmetụta thermopile agwakọtara maka NDIR (nchọpụta gas nke infrared) bụ ihe ntanetị ọkụ thermopile nwere ọwa nwere volta mgbaama mgbapụta nke dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas. Akwụkwọ ntụnye na-akwụ ụgwọ maka ọnọdụ niile metụtara.
ASIC AFE Integrated Dual Channel NDIR Infrared CH4 Sensor maka Flammable Gas Sensor-SDG11DF33G1
Ezinụlọ SDG11DF33G1 nke ihe mmetụta thermopile agwakọtara maka NDIR (Infrared gas detection) bụ ihe ntanetị ọkụ thermopile nwere ọwa nwere akara ngosi mgbapụta ọfụma dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas. Akwụkwọ ntụnye na-akwụ ụgwọ maka ọnọdụ niile metụtara.
Single Channel Methane (CH4) NDIR Gas Sensọ maka Natural Gas Leak Detector na Mita-SSG11DF33
Ezinụlọ SSG11DF33 nke ihe mmetụta thermopile agwakọtara maka NDIR (Infrared gas nchọpụta) bụ otu ọwa thermopile sensọ nwere akara ngosi mgbapụta ọfụma dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas.
Ejikọtara ASIC AFE Single Channel NDIR Gas Sensor CH4 Gas Detector-SSG11DF33G1
Ezinụlọ SSG11DF33G1 nke ihe mmetụta sensọ thermopile maka NDIR (Infrared gas nchọpụta) bụ otu ọwa thermopile sensọ nwere akara ngosi mgbapụta ọfụma dabara na ike infrared (IR). Otu infrared warara gbalaga ngafe n'ihu ihe mmetụta na-eme ka ngwaọrụ chebaara iche ịta gas.
IR Light Source maka NDIR Infrared Thermopile Gas Sensor Detector
Igwe ọkụ ọkụ IR bụ ụdị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, mkpuchi mkpuchi iko ya pụrụ iche nwere ike
zipu ìhè infrared. Ọ na ọtụtụ-eji infrared gas nchọpụta. Oke Oke nke
Igwe ọkụ ọkụ IR bụ 3.18mm, na ntụgharị ụda olu nwere ike ịbụ 3 Hz.